#Farmaajo oo Soomaalida kunool Koonfur Afrika ka dhageysanaya dhibaatooyinka ay qabaan. - Get Latest News From Horn of Africa
#Farmaajo oo Soomaalida kunool Koonfur Afrika ka dhageysanaya dhibaatooyinka ay qabaan.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan Dalka Koofur Afrika ayaa saacadaha soo socda kulan la qaadanaya Soomaalida kunool Dalkaasi.
Sida ay xaqiijisay Madaxtooyada Soomaaliya, Madaxweyne Farmaajo waxa uu kala hadlayaa Jaaliyadda Soomaalida ee Koofur Afrika habka ay u nool yihiin iyo dhibaatooyinka lasoo darsa.
Soomaalida kunool Koofur Afrika ayaa kunool labo xaaladood oo kala ah, in ay ku ganacsadaan dalkaasi iyo weeraro barbar socda oo ay kala kulmaan Burcadda.
Weerarada loo geysto dadka Soomaalida ayaa mararka qaar sababa in dhimasho iyo dhaawac, halka xiliyada qaarna la boobo Goobahooda ganacsiga.
Dhanka kale Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa saakay ka qaybgalaya Caleemo-saarka Madaxweynaha Cusub ee Koofur Afrika Cyril Ramaphosa.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed oo Warbaahinta xalay xili dambe kula hadlay Magaalada Johannesburg ayaa sheegay in wafdiga Madaxweynaha ay usoo gudbayaan xili hore Magaalada Pretoria oo xafladda lagu qabanayo.
Soomaalida kunool Koofur Afrika waxa ay la kulmaan weeraro ka dhan ah, Booliiska ayay ku eedeeyeen in ay ka gaabiyeen wax ka qabashada dhibaatooyinka ay la kulmaan.
Sanadkaan 2019-ka, waxaa Koofur Afrika marar kala duwan lagu dilay Muwaadiniin Soomaali ah oo kor u dhaafaya 20-ruux, waana tiro ka badan sanadihii lasoo dhaafay sida ay Mustaqbal u sheegeen Soomaali kunool Koofur Afrika.